Akụkọ - Ịrụkọ ọrụ ọnụ
Iji mara ibe anyị nke ọma ma kwalite ọrụ otu maka igwe JINJIA anyị, ụlọ ọrụ anyị haziri ndị ọrụ niile ka ha nwee ọrụ otu na -eme n'èzí na June 16.nke, 2021. Isiokwu mmemme bụ "Ịdị n'otu na imekọ ihe ọnụ - ịrụkọ ọrụ ọnụ".
Anyị malitere n'elekere asatọ nke ụtụtụ wee rute ebe anyị ruru ihe dị ka ọkara awa mgbe e mesịrị. Emere mmemme ahụ site na egwuregwu dị iche iche ọkachasị. Emebere egwuregwu ọ bụla iji bulie ọrụ otu na imekọ ihe ọnụ. Ka emechara egwuregwu, anyị ji aka anyị mee nri ehihie na -atọ ụtọ. N'oge usoro ahụ niile, anyị na -arụkọ ọrụ ọnụ, na -egosi mmụọ imekọ ihe ọnụ JINJIA nke ọma.
Nke a bụ n'ezie ihe ịga nke ọma na -arụkọ ọrụ ọnụ n'èzí. Ọ na -eme ka mmekọrịta dị n'etiti ndị ọrụ ibe, na -enwetakwa ụlọ ọrụ ka mma na imekọ ihe ọnụ. Site na ọrụ a, ntụkwasị obi anyị ga -adị n'otu dị ka otu. Ọ na -ewetara anyị otu ndị otu zuru oke na -arụ ọrụ n'ọdịnihu.
Ọmarịcha ndị otu na ndị otu na -enye ndị ahịa anyị akụkụ na ọrụ mbata ọfụma dị mma!
Oge ezipụ: Jun-29-2021